Ilka-u-cadayidda carruurta/Borsta tänder på barn – somaliska - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Borsta tänder på barn – somaliska
Burushka iyo daawada cadayga ilkaha (ca 1 sida)
Jiifi ilmaha yar (ca 1 sida)
Ugu caday xoqid fudud (ca 1 sida)
Mar walba ma ahan wax sahlan in carruurta loo cadayo ilkaha (ca 1 sida)
Waxaa habboon in cadayidda ilkaha lagu bilaabo isla marka uu ilmaha u soo baxo iligga ugu horreeya. Haddii uu ilmuhu goor hore caadeysto, waxaa fududaaneysa ilka-cadayidda caado u noqoto ilmaha.
Burushka iyo daawada cadayga ilkaha
Jiifi ilmaha yar
Ugu caday xoqid fudud
Mar walba ma ahan wax sahlan in carruurta loo cadayo ilkaha
Carruurta ilaa laba sano jirka ah waxay marka hore tahay inay caado u noqoto inay burushka ilkaha afka ku hayaan. Waxaa la gaaray waqtigii si joogto ah ilkaha loogu cadayi lahaa isla marka iligga ugu horreeya u soo baxo. Ka hor inta uusan iliggu soo bixin waxaa cuncuna cirridka oo markaas wuxuu ka helayaa in uu afka gashado wax uu qaniino, sida burushka ilkaha.
Ilmaha ilkaha u caday maalintii laba goor. Subaxdii, oo quraacda kadib wanaagsan tahay, iyo fiidkii inta uusan seexan.
Isticmaal burush leh madax yar oo jilicsan. Dooro daawada midda dhadhanka khafiifsan leh. Waxaa jira daawo caday oo aan dhadhan lahayn oo aan xumbeyn. Talo weyddiiso dhakhtarkaaga ilkaha.
Marka ilmuhu helo iligga ugu horreeya waxaa ku habboon dhibic daawo caday ah oo aan ka weyneyn ciddida faryarada ilmaha.
Waxaa muhiim ah in ay daawadaas ku jirto maaddada foloraydh oo ilkaha adkeysa. In ilkaha ilmaha subax iyo habeenba lagu cadayo daawo foloraydh leh waxay ilkaha ilmaha ka ilaalisaa inay dalool yeeshaan. Waxaa jira daawooyin ilkaha oo foloraydh ku kala badan tahay, taas oo loogu talagalay da’aha kala duwan. Khubarada dunida oo dhammi waxay isku raaceen in foloraydh (fluor) ay muhiim u tahay adkaynta ilmaka iyo caafimaadkooda.
Ilkaha waa loo cadayn karaa ilmaha yar isagoo jiifa. Miiska xannaanada ayaa noqon kara meel ku habboon. Ilmuhu wuxuu kaloo ku jiifi karaa sariirta, adigoo madaxiisa dhabta ku haya. Haddaad ilmaha dhabta saartid waxaa kuu fududaanaya inaad afkiisa aragto oo aad gaarto ilkaha dambe, iyadoo isla markaasna uu cunugga dareemayo xasilooni.
Carruurta badankood afka ayey kala qaadaan haddaad si tartiib ah far afka uga geliso oo ka taabato canka gudahiisa.
Raadi habka ugu fudud
Carruurta da’doodu ka bilaabato afar ilaa shan sano waa ay istaagi karaan marka loo cadaynaayo. Adigu fariiso oo ilmaha u daa in uu madaxiisa ku soo tiiriyo garabkaaga iyo gacantaada. Mararka qaarkood waxaa kaaga fiicnaan kara in uu cunugga dhabta kaaga fariisto.
Haddaad far ama laba farood afka u geliso oo gudaha canka taabsiiso adigoo xoogaa dibnaha u kala qaadaya, waxaa kuu fududaanaya inaad aragto afka gudahiisa.
Waa ay wanaagsan tahay in uu cunugga goor hore bilaabo in uu isagu cadaysto ilkaha, laakiin wuxuu u baahan yahay in qof weynicaawiyo ilaa uu ka gaarayo toban ilaa laba iyo toban sano, ama mararka qaarkood ka badan. Marka uucunugga gaaro lix sano waxaa u soo baxa ilko cusub oo xasaasi ah oo u baahan in si dheeraad ah loo nadiifiyo.
U caday ilkaha oo dhan ilaa cirridka. Dhinac dhinac ugu caday adigoo xoqid aad u fudud marba ilig ugu cadaynaya. Waxaad isku dayi kartaa inaad burushka u qabsato sida qalinka si ay xoqiddu kuugu fududaato. U caday ilkaha dhanka gudaha, bannaanka iyo gawsaha.
Markaad u cadayeyso gudaha ilkaha hore ee labada daan, toos ugu aaddi burushka. Hubi in burushku gaarayo cirridka. Aad ha ugu xoqin burushka oo mar walba si tartiib ah ilkaha uga mari.
U sug inta cunugga ka luqluqanayo xumbada
Laga bilaabo lix sano waxaa ku habboon in marka loo cadaynayo uu cunugga biyo yar kaga luqluqdo xumbada inta uusan iska tufin. cunugga waa in uu cadayga kadib biyo ku luqluqdaa.
Burushka korontada ku shaqeeya
Burushka korontada ku shaqeeya waxaad u isticmaali kartaa carruurta ka bilaabata saddex sano. Burushka korontada ku shaqeeya wuxuu in ka badan burushka caadiga ah ilkaha uga qaadaa huurada ku dhegta, laakiin waxaad u baahnaaneysaa inaad ugu cadayso hab ka duwan burushka caadiga ah. Waxaa talo wanaagsan noqon kara in burushka korontada ah lala tago kalkaaliyaha caafimaadka ilkaha si uu kuu tuso habka loo isticmaalo.
cunuggawuxuu u baahan yahay in laga caawiyo in uu ku cadaysto burushka korontada ah inta uu ka gaarayo toban ilaa labaiyotoban sano. Carruurta qaarkood si fudud ayey ugu cadaysan karaan burushka korontada ku shaqeeya oo leh madaxa ama afka yar.
Burushka madaxa yar ma qaadi karo daawo caday oo ku filan. Kolkaas waxaad marka hore ilkaha kore ku caday kartaa daawo ilaa hal sentimitir ah, kadibna in le’eg oo aad ku cadaydo ilkaha daanka hoose.
Waxaase muhiim ah inaad si joogto ah ugu dadaasho inaad ilmaha u cadaydo ilkaha. Mararka qaarkood taasi waa adkaan kartaa oo markaas waxaa lagu beddeli karaa in daawada ilkaha loo marmariyo. Hab kale wuxuu noqon karaa in ilmaha loo daayo in uu isagu marka hore keligiis cadaydo kadibna aad adigu u sii waddo.
Waxay badanaaba ku saabsan in uu ilmuhu tijaabiyo rabitaankiisa. In dulqaad loo yeesho waxay suurtagelisaa in ilka-cadayiddu noqoto caado-maalmeed xataa haddii ilmuhu marka hore muran ka keeno.
Tifaftire: Ingemar Karlsson Gadea, Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden
Hubiye: Helen Isaksson, övertandläkare, Folktandvården, Region Jönköpings län
Sidoo kale nuxurka oo dhan waxa ka sii shaqeeyey, hubiyey oo ansixiyey waaxda tafatirka, madaxa caafimaadka iyo golaha tafatirka ee 1177 Vårdguiden.